Taliyaha booliska Puntland ee gobolka Mudug oo ka hadlay dad la qabtay & howlgallada gobolka ka socda
September 16, 2020 Xuseen 2
Ciidanka ammaanka ee Puntland oo howlgallo qorshaysan ka sameeyey deegaamo katirsan gobolka Mudug ayaa gacanta ku soo dhigay askari dhowaan dad shacab ah ku laayey gudaha magaalada Galkacyo.
Gaashaanle sare Muumin Cabdi Shire taliyaha qaybta booliska gobolka Mudug ee Puntland ayaa warbahainta u sheegay in Askariga ay Ciidamada kasoo qabteen degaanka Shakaal oo dhanka Waqooyi bari ka xiga degmada Jariiban ee gobolka Mudug.
Taliye Muumun ayaa sheegay in askarigaan oo katirsanaa ciidamada Daraawiishta Puntland uu 11-kii Bishaan September Waqooyiga magaalada Galkacyo ku dilay nin lagu Magacaabi jiray Cabdullaahi Daahir Aadan iyo dad shacab ah oo rasaastu haleeshay.
Dhanka kalena, taliyaha qaybta booliska gobolka Mudug ee Puntland Gaashaanle Sare Muumin Cabdi Shire waxa uu sheegay in howlgallada ammaanka lagu sugayo lagulana dagaalamayo maandooriyaha ee gobolka Mudug ay weli socdaan isagoona shacabka ka codsaday inay gacan siiyaan.
A. Arar says:
Waxaan filayaa askariga waxaa laga soo qabtay degaan ka tirsan degmada Jirriiban, ee ma aha degmada Galdogob sababtoo ah waa labo degmo oo Gaalkacyo ka kala xiga qorrax-kasoo-bax iyo qorrax-u-dhac. Halmaan hadal kuma jiro.
Qoraalkaan iyo tilmaantaan beenta ah waxay marqaati u yihiin inuu beenloow yahay ninkaan cuqdad då qaba ee meeshaan wax ku xarxsriiqa, laangaab waa naargale horay baa loo yiri qof kaste waa u caraysanyahay kkkkkkkkk midkaan illaahow uusan isha nala helin indha miriglaha ah ee qalbiga ka jirran.
XOG-Madaxweynaha Puntland oo ku wajahan magaalada Baydhabo & u jeedada socdaalkiisa.
WARBIXIN+VIDEO: Fursadaha Doorashada Federalka Puntland is-fidinteeda ma uga faa’iidaysan doontaa?
Sawirro-Madaxweynayaasha dowlad goboleedyada oo caawa kulan laysugu yeeray & xog ku saabsan
Madaxweyne Denni hadduusan Farmaajo & RW Rooble kala heshiin labadan qodob guul kama keenayo Muqdisho.
Wasiiro katirsan Puntland oo dhaqdhaqaaq ka bilaabay gobolka Sool kadib hoos u dhac kuyimid dakhligii gobolka.
Khayre oo kulamo dhabar jebin ah ka bilaabay Muqdisho & shir uu la qaatay Cabdi Xaashi
Ra’iisul wasaaraha magacaaban oo kulamo ka bilaabay magaalada Muqdisho
Madaxda dowlad goboleedyada oo bilaabay fulinta balanqaad ay u sameeyeen Farmaajo & Xod xodashada golaha shacabka.
XOG: Faahfaahin ku saabsan Gabar 5 sano jir ah oo lagu kufsaday Muqdisho.
DAAWO: RW Cusub ee Soomaaliya oo jeediyey hadalkii koowaad.
DAAWO-Ciidanka Somaliland oo lagu qaaday weerar sababay dhimasho & dhaawac iyo agaasimayaal xabsiga loo taxaabay.
DAAWO: Dhooba-Daarood oo ka digay Arrin laga wado Muqdisho, kuna wajahan SSC
DAAWO-Somaliland wasiir ka soo jeeda SSC oo ku sugan Laascaanood & ilaaladiisa ayaa laga helay Covid19 & xaaladdiisa.
DHEGEYSO-Ciidanka Somaliland oo howlgallo wada, maxaabiis ay soo qabteen & saraakiil Alshabab ah oo gaarey.
Axmed Madoobe oo kulamo qancin ah la qaatay xildhibaanada laga soo doorto Jubbaland